Ibhizinisi le-Crunchbase le-Salesforce: Khomba, Ngenisa, futhi uvumelanise i-B2B Prospect Data | Martech Zone
Izinkampani emhlabeni wonke zisebenzisa amandla I-Crunchbase idatha yokucebisa imininingwane yabo yokulindela ibhizinisi, ukuqinisekisa inhlanzeko yedatha enhle, nokunikeza amaqembu abo okuthengisa ukufinyelela kulwazi lwenkampani abaludingayo ukuthola amathuba.
ICrunchbase yethule okusha Ukuhlanganiswa kweSalesforce kwabo bonke abasebenzisi beCrunchbase lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngabanye kanye namaqembu amancane okuthengisa athole ngokushesha futhi asebenze kumathemba ekhwalithi ephezulu.
Lesi sibuyekezo siza ngesikhathi esibucayi kakhulu kubathengisi - nge I-80% yezinkampani ngenkuthalo behlola izindlela zokushintsha amasu abo okuya emakethe abheke kwidijithali, nangayo Ama-32% wabathathi bezinqumo ngithi kungenzeka kakhulu ukuthi ushintsho oluhlobene nobhubhane ezindleleni zokuthengisa luzohlala njalo.
Ngalokhu kuhlanganiswa, abasebenzisi be-Crunchbase ngeke besasebenzisa isikhathi esibalulekile sokuthekelisa ngokwenza amathemba kusuka ku-Crunchbase kuye ku-CRM yabo. Ukuhlanganiswa kweSalesforce kweCrunchbase Enterprise kukuvumela ukuthi ucebise wonke amarekhodi e-akhawunti amasha nakhona akhona ngedatha yezezimali kaCrunchbase nedatha yezezimali ephelele (leyo yinkambu yedatha engama-40 +).
I-Crunchbase kuzici ze-Salesforce
Suka ocwaningweni uye ekufinyeleleni ngokuchofoza okumbalwa: Izihlungi zokusesha ze-Crunchbase, kubhangqwe ne- isipiliyoni sephrofayili yenkampani entsha vumela abasebenzisi ukuthi bafunde ngenkampani ethile, bathole amathemba, bese uwagcina ngqo ku-Salesforce.
Gxila ekuthengiseni, hhayi ekufakweni kwedatha: Bona ukuthi yimaphi amathemba asevele ekhona ku-Salesforce futhi uvikele ukuphindwa kwerekhodi. Lapho abasebenzisi bethola futhi begcina amathemba amasha kusuka kwaCrunchbase kuye kwaSalesforce, imininingwane eyisisekelo yenkampani edingekayo ukwenza ukufinyelela komuntu uqobo nayo iyasindiswa.
Yiba namathemba abawalondolozayo: Ngokuncintisana okunzima phakathi kwabathengisi, inselelo yokuqala imvamisa ifuna ithemba. Noma ikuphi okulindelwe ngumsebenzisi kusuka ku-Crunchbase kuya ku-Salesforce kuzoba ngaphansi kwegama labo.
Abathengisi bathwele kanzima ukuthola amakhasimende angaba khona asenamandla okuthenga phakathi nalesi simo somnotho. Bachitha isikhathi esiyigugu besesha futhi befanelekela ukuholwa okusha, ngaphambi kokuthi bathumele ne-imeyili yokuqala yokufinyelela. Ukuhlanganiswa kwethu okusha kwe-Salesforce kusheshisa leyo nqubo yokubheka izinto ngokuhlanganisa amathuluzi okufunisisa we-Crunchbase kanye ne-database yenkampani nokugeleza komsebenzi okukhona kwamaqembu okuthengisa. Manje, abathengisi bangavumelanisa ngokushesha ama-akhawunti amasha abawatholile ku-Crunchbase ngqo ku-CRM yabo. Futhi, bheka kalula ukuthi yimaphi ama-akhawunti we-Crunchbase alahlekile esimweni sabo se-Salesforce, ukuze bathole ama-akhawunti okungekho noyedwa eqenjini labo ongazomangalela.
U-Arman Javaharian, iNhloko Yomkhiqizo we-Crunchbase
ICrunchbase nayo isanda kwethula i- qedela ukuhlela kabusha amaphrofayli enkampani ngokubukwa kwethebhu kuvela amaphuzu wedatha asemqoka asiza abathengisi ngokushesha:
Qonda ukuthi inkampani yenzani nesimo sayo sokukhula.
Hlaziya ukusebenza kwenkampani ngolwazi lwezezimali kufaka phakathi isamba semali nokutholwa.
Bamba imininingwane ukuze unqume ukuthi ngabe inkampani iyazifanela yini izidingo zabo ngemininingwane ejulile kubuchwepheshe benkampani, ibanga lemali elinganiselwayo, abantu nezimpawu zokukhula.
Funda kabanzi Nge-Crunchbase ye-Enterprise
Ukuzikhulula: UDouglas ungomunye wabasunguli be- Highbridge, a Umlingani weSalesforce